Zvinobudirira nepachinko ruzivo inounganidzwa kushandisa mashoko Robo nzvimbo Seven
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Zvinobudirira nepachinko ruzivo inounganidzwa kushandisa mashoko Robo nzvimbo Seven
Pane nepachinko nzvimbo kuti mashoko Lobo nzvimbo Seven. Saizvozvo sezvo P-WORLD kuti maindasitiri mashoko nzvimbo, unogona kuona dzakadai kunotsvaka muenzaniso mashoko uye nepachinko imba, zvakasiyana-siyana mashoko. In
, asi unogona kufunga kuti kana kwete ndiyo kufanana P-WORLD, sezvo zita date Lobo nzvimbo Seven, mune nzvimbo iyi, yakananga Data uye nepachinko muchina mumwe nomumwe nepachinko parlors kuti vakanyorwa yokutevedzera humboo yasvika kuonekwa, razova vaifanira zvomuviri.
ndaona data, jackpot kanoverengeka, kutanga rotational kumhanya, unogona kuonekwa kusvikira payout nhamba. Nepo kugara pamba, saizvozvo kuti kutarisa mashoko Robo iri nepachinko parlors, uyewo yava zvinogoneka rakatevera zuva papuratifomu kusarudza.
kana kuunganidza mashoko ari kwagara rimwe zuva, anoenda nepachinko kuchitoro akavhara asati, ndinofunga kuti pane nzira dzakawanda kuti vasvike kuona chimwe chezvinhu mashoko.
Asi havafaniri kuenda kune nepachinko yokumusoro ose zuva, kusvikira basa unodiwawo, kamwe zvakaipa katsamba, uye regai kuenda kuchitoro rakatevera, akaitawo kuti chokwadi kuti zvakarurama Data handizivi, kunyatsoshanda haritauri kuti zvakananga.
Naizvozvo, vakarongeka kushandisa ichi date Robo nzvimbo Seven, uye zvinokwanisika nyore uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa. mumwe nomumwe Data nerimwe nepachinko yaiitirwa.
First, kuumba tafura Data mumba pachako kombiyuta. Ikoko, humboo Robo nzvimbo Seven, unogona kana isu kutevedzera namatidza rwaiwanikwa tafura Data. Data inofanira kutevedzerwa ndiro yakazara simba bhora nhamba uye uwandu nokumukirana.
izvi, zvinova zvinoita kuti kuona imwe chete muchina akatsemura nechigadziko. Kana kuisa nzira, muchina kutsemura tiine muchina uye chikamu zvachose zuva nezuva rimwe, zviri nyore chaizvo nokuti inogona dzaona.
By pakuverenga muchina paradzanisa, uchakwanisa kunzwisisa zuva uye zvachose dzakananga patafura ezvinhu. The chepakutanga harioneki chete nepachinko parlors Day Sezvo kuona mashoko kumba, uye zvinogonawo kusarudza kuchikuva kuti chinangwa pazuva yapfuura zuva, kana moenda kune nepachinko yokumusoro, uchakwanisa kuisa pfungwa pane check the chipikiri.
date muunganidzwa, nekuti inguva yakawanda uye nesimba, iwe une zvakakosha kuti kana ari sei nyore chaiwo basa. Data Robo nzvimbo Seven ndiyo nzvimbo kuti vakawana kuvapo Data kwakaoma dzimwe nzvimbo.
Zvisinei, anogona kuona data, zvichava chete nepachinko parlors kuti vakanyorwa, nepachinko parlors kuti muri kuenda chichava chinhu kuti hazvina musoro kana asina kunyoreswa. Zvadaro, kuona musiyano pakati P-WORLD, saka takadzoka kubhadhara, ndinofunga kuti ndiyo nzvimbo inonzi kana vaiona ive ruzivo bhiri.
chikamu kuverenga sefungu data, saka takafara chaizvo kuti zvakafanana mune imwe nepachinko yokumusoro, zvinodiwa hapana mubvunzo. Inogona nyore pasina kushandisa nguva, nokuti mashoko Utilisation nzira, edza.